တခြားသူတွေသိစေချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်ရေးချင်တာလေးတွေရေးရအောင်ဖြစ်ဖြစ်၊ စာရေးတဲ့ဝါသနာလေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားတာပါ။
ဘာသာတရားတွေအပေါ်နောက်ထပ်ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကတော့ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစဉ်းစားရကြပ်လှတဲ့ ရှုပ်ထွေးမှုကို ဖြေရှင်းပြီးသွားပြီလို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ပြောကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် ဒါဝင်ရဲ့ သီအိုရီကိုထောက်ခံပြီးတော့ လူသားတွေဟာ မျောက်ဝံလိုအကောင်မျိုးကနေ ဆင့်ကဲဖြစ်ထွန်းလာတယ်လို့လည်းပြောကြပါဦးမယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်သွားခဲ့ပါပြီ ဒါဝင်ရဲ့သီအိုရီကို မည်သူမျှသက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။
ကိုရ်အာန်ကျမ်းစာက လူသားဟာများစွာသောအဆင့်တွေကို တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တက်ရင်း ဆင့်ကဲဖြစ်ထွန်းလာတယ်ဆိုတဲ့ အမြင်ကိုတော့ လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ မျောက်ဝံလိုအကောင်မျိုးကနေ ဖြတ်သန်းပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးကိုတော့ လုံးဝလက်မခံပါဘူး။ ကျမ်းမြတ်ကိုရ်အာန်ကထောက်ခံတင်ပြတဲ့အမြင်ကတော့ လူသားဟာ သီးခြားမျိုးစိတ်အဖြစ်နဲ့ တစ်ခုသော ဆဲလ်အဆင့်ကနေပေါက်ဖွားလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနည်းတူစွာပဲ ကိုရ်အာန် ကျမ်းတော်က ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးတာက တမန်တော် အာဒမ် ဟာ ပထမဆုံးလူသားမဟုတ်ဘဲ ပထမဆုံးသော တမန်တော်သာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။
(ကိုရ်အာန်ကျမ်းစာ အခန်းကြီး ၂ အခန်းငယ် ၃၁ မှာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။)
လူသားရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာ မျိုးဗီဇဆိုင်ရာပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ခြင်း (mutation) ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ တစ်ချို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ယူဆကြပါတယ်။ ဂျေမိုနော့ဒ် ပြောသလိုဆိုရင်တော့ …
“ ဆင့်ကဲ့ဖြစ်စဉ်ရဲ့ မူလအစဟာ D.N.A ပုံစံထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အခန့်မသင့်မတော်တဆ ဖြစ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။” အဲ့ဒါကိုပဲ Mutation မျိုးဗီဇဆိုင်ရာပြောင်းလဲခြင်းလို့ သိကြတာပါပဲ။
ဒီသီအိုရီကိုပဲ များစွာသော သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ငြင်းပယ်ကြပြန်တယ်။ သူတို့ထဲကတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရုပ်ဝါဒီ ရှရှားဇီဝဗေဒပညာရှင်ဖြစ်သူ အော်ပရင်း (Oparine) ဆိုသူက သက်ရှိဖြစ်ထွန်းခြင်းမှာ အမှတ်တမဲ့ကံအားလျှော်စွာ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ သီအိုရီကို ပွင့်လင်းစွာပဲ ငြင်းပယ်ပါတယ်။ သူပြောတာက …
“ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တစ်ရပ်လုံးသည် ခိုင်မာညီညွတ်သေချာမှုရှိယုံတင်မကဘဲ အဆုံးမရှိထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့် ထပ်ဆင့်ပြန့်ပွားခြင်းများကို ပြင်ပအခြေအနေတစ်ရပ်က ပြဌာန်းနေခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ဤကဲ့သို့ အဆင့်မြင့်မားစွာဖြစ်ပေါ်နေသော ဖြစ်စဉ်တစ်ရပ်လုံးသည် သူ့အလိုအလျှောက် တိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်လာရသည် မဟုတ်ပါပေ။ ”
ဒီသီအိုရီ (မတော်တဆဖြစ်ခြင်း) ရဲ့ ယုတ္တိမတန်ပုံကို အော်ပရင်းကပဲ သာမန်လူနားလည်နိုင်အောင် သင့်တော်တဲ့ နှိုင်းယှဉ်ချက် ဥပမာလေးနဲ့ ခုလိုရှင်းပြပါသေးတယ်။
“ အက္ခရာ နှစ်ဆယ့်ခြောက်လုံးပါတဲ့ စာပုံနှိပ်ဘလောက်တုံးလေးတွေကို ရှုပ်ထွေးရောမွှေပြီး ကျွန်ုပ်တို့သိနားလည်တဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်အဖြစ် ကံကောင်းထောက်မပြီး ပုံနှိပ်ထွက်လာအောင် မျှော်လင့်သလိုဖြစ်နေပါတယ်။ တကယ်တော့ အသိဉာဏ်ရှိပြီး သေချာစီစဉ်ထားတဲ့ အက္ခရာစကားလုံးတွေကသာ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို သီကုံးနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာ ရှင်းလင်းပါတယ်။ ”
လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုတွေဟာ မြေကြီးထဲမှာ အနည်းနဲ့အများဆိုသလိုရှိနေကြတာကို ကျွန်ုပ်တို့သိပါတယ်။ ကျမ်းမြတ်ကိုရ်အာန်မှာ လူသားဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ များစွာသော အဆင့်တွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဥပမာတစ်ချို့ကတော့ …
“အရှင်မြတ်သည် အသင်တို့အား အမျိုးမျိုးသောပုံသဏ္ဍန်နှင့် အခြေအနေအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။” (ကိုရ်အာန်ကျမ်းစာ - အခန်းကြီး ၇၁ အခန်းငယ် ၁၅ )
ထာဝရဘုရားရှင်မြတ်သည်ကား မိမိတစ်ပါးတည်းဖြင့် ပြည့်စုံတော်မှု၏။ အန္တကရုဏာတော်ရှင်လည်းဖြစ်တော်မူ၏။ အရှင်မြတ်အလိုတော်ရှိပါလျှင် အသင်တို့အားရုတ်သိမ်းတော်မူ၍ အသင်တို့အား အခြားမျိုးနွယ်များမှ ပေါက်ဖွားရှင်သန်စေခဲ့သကဲ့သို့ အခြားမျိုးနွယ်များမှသားသမီးအဆက်အနွယ်များကိုလည်း ပေါက်ဖွားရှင်သန်စေပြီး အောင်မြင်မှုပေးသနားတော်မူနိုင်ပေသည်။
(ကိုရ်အာန်ကျမ်းစာ - အခန်းကြီး ၆ အခန်းငယ် ၁၃၄ )
“ငါထာဝရဘုရားရှင်သည် အသင်တို့အား ဖန်ဆင်းတော်မူ၍ အသင်တို့အား ခွန်အားပေး၍ခိုင်မာစေခဲ့ပေသည်။ အရှင်မြတ်အလိုတော်ရှိပါလျှင် အသင့်တို့ကဲ့သို့ အခြားသူများဖြင့် အသင့်တို့ကို အစားထိုးနိုင်တော်မူ၏။”
(ကိုရ်အာန်ကျမ်းစာ - အခန်းကြီး ၇၆ အခန်းငယ် ၂၉ )
ကိုရ်အာန်ကျမ်းစာက လူသားဟာ အခုလိုအဆင့်တွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကံအားလျှော်စွာ မတော်တဆဖြစ်ပျက်မှုဆိုတဲ့အစား ကြိုတင်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုအဖြစ် ဖော်ပြပါတယ်။ ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ ထာဝရဘုရားရှင် ကိုရ်အာန်ကျမ်းစာထဲမှာ ဖော်ပြထားတာက လူသားဟာ သူ့ရဲ့ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အဆင့်တစ်ခုကိုဖြတ်သန်းရပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ အသံမြည်တဲ့ ရွှံ့ပုတ်ခြောက်အဆင့်ဖြစ်ပြီး D.N.A ဖြတ်သန်းရတဲ့ အဆင့်ကလည်း အဲ့ဒီတိကျတဲ့အဆင့်ပဲဖြစ်နေပါတယ်။ D.N.A ဟာ စိုစွတ်မှုကို နေရောင်အောက်မှာ ခြောက်သွေ့စေရပြီး အဲ့ဒီအဆင့်မှာပဲ စိုစွတ်တဲ့ ရေဘက်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိစေရပါမယ်။ စက္ကန့်ပိုင်းလေး လျော့နည်းသွားတာ ဒါမှမဟုတ် ပိုသွားပြီးကုန်းပေါ်မှာရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဖြစ်စဉ်က ဘယ်တော့မှရပ်တန့်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
လူသားမျိုးစိတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရဲ့များစွာသောအဆင့်တွေကို ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းတွေက သက်သေအဖြစ်ဖော်ပြပါတယ်။ အစောဆုံးရှာဖွေတူးဖော်ရရှိခဲ့တဲ့ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းကို လူစီလို့သိကြပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်း ၃.၅ သန်းခန့်ကတည်းက ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ရှေးအကျဆုံး လူတူမျိုးနွယ် (Hominids) တွေကို အော်စထရပ်လို ပီးသီးကပ်စ် (Australopithecus) လို့ခေါ်ပါတယ်။
ပီသီကန်သရိုပိုင်းစ် (Pithecanthropines) ဒါမှမဟုတ် အာခန်သရိုပီးရန်းစ် (Archanthropians) တွေကတော့ ဒုတိယလူတူမျိုးနွယ်လှိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၅ သိန်းခန့်က ကမ္ဘာမှာနေထိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး အကြမ်းဖျင်း နှစ်ပေါင်း ၃ သိန်းခွဲခန့်လောက်တည်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
နီယန်ဒါသယ်လ် (Neanderthals) သို့မဟုတ် ပဲလီယန်သရိုးပီးယန်း (Paleanthropians) တွေကတော့ တတိယလူတူမျိုးနွယ်လှိုင်းဖြစ်ပြီး သူတို့ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁ သိန်းခန့်က ကမ္ဘာမှာနေထိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး အကြမ်းဖျင်း နှစ်ပေါင်း ၆ သောင်းခန့်လောက်တည်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
နောက်ဆုံးလူတူမျိုးနွယ်ကတော့ မျက်မှောက်ခေတ်လူသားရဲ့မျိုးနွယ် ဟိုမိုဆပီးယန်း (Homosapien) ဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃ သောင်း ၅ ထောင်ခန့် ဒါမှမဟုတ် ၄ သောင်းခန့်ကတည်းက တည်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
ကိုရ်အာန်ကျမ်းစာမှာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုကို အခြားမျိုးနွယ်တစ်ခုနဲ့ ဘယ်လိုအစားထိုးခဲ့တယ်ဆိုတာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ မုက္ခပတ်တော်အချို့ကတော့ ….
“ငါအရှင်မြတ်သည် အသင်တို့အား ရွံ့စေးမှဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့၏။ ထို့ပြင်အသင်တို့အတွက် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ကာလတစ်ခုရှိပေ၏။ ထို့အပြင် အရှင်မြတ်နှင့်တွေ့ဆုံရန် သတ်မှတ်ထားသော နောက်ထပ် အချိန်ကာလတစ်ခုလည်း ရှိပေ၏။ သို့ပါလျှက် အသင်တို့ သံသယဝင်ကြ၏။” (ကိုရ်အာန်ကျမ်းစာ အခန်းကြီး ၆ အခန်းငယ် ၃)
ထိုမှတပါး စင်စင်ဧကန် ငါအရှင်မြတ်သည် လူသားကို ပုံသွင်းပြီးဖြစ်သော အသံမြည်သည့် ရွှံ့ပုတ်ခြောက်ဖြင့် ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့လေသည်။ (ကိုရ်အာန်ကျမ်းစာ အခန်းကြီး ၁၅ အခန်းငယ် ၂၇)
အောင်သန်းလွင် B.C.Sc (Hons)
Posted by Aung Than Lwin at 10:17 PM
Labels: အစ္စလာမ်ဘာသာ, အစ္စလာမ်နှင့် သိပ္ပံ
ယနေ့အချိန်ကာလမှာ ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့က ကျွမ်းကျ...
ဘာသာရေးအပြန်အလှန် နားလည်မှု (5)
အစ္စလာမ်နှင့် သိပ္ပံ (3)
အစ္စလာမ်နှင့် အမေးအဖြေ (2)
ကျော်စွာ ၁၀၀ (1)
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ စဉ်းစားစရာ မေးခွန်းများ [ဖြေဆိုပြီး]
အစ္စလာမ်သာသနာနှင့် ပတ်သတ်၍ အမြင်မရှင်းလင်းသော မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုရှင်းလင်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
“ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တစ်ရပ်လုံးသည် ခိုင်မာညီညွတ်သေချာမှုရှိယုံတင်မကဘဲ အဆုံးမရှိထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့် ထပ်ဆင့်ပြန့်ပွားခြင်းများကို ပြင်ပအခြေအနေတစ်ရပ်က ပြဌာန်းနေခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ဤကဲ့သို့ အဆင့်မြင့်မားစွာဖြစ်ပေါ်နေသော ဖြစ်စဉ်တစ်ရပ်လုံးသည် သူ့အလိုအလျှောက် တိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်လာရသည် မဟုတ်ပါပေ။ ” ရှရှားဇီဝဗေဒပညာရှင် အော်ပရင်း (Oparine)
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ စဉ်းစားစရာ မေးခွန်းများ [ဖြေဆိုပြီး] - Questions including answers
၁. ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို မဖန်ဆင်းခင်က အလ္လာဟ်ရှင် ဘယ်မှာ နေပါသနည်း? ၂. အလ္လာဟ်ရှင် ကို မည်သူဖန်ဆင်း ခဲ့သနည်း? အလ္လာဟ်ရှင် အဖြစ်သို့ ...
မိုဟမ္မဒ် (Muhammad) (570-632) ဒေါက်တာ သန်းထွန်း (ကျော်စွာ ၁၀၀)
မုဟမ္မဒ် (Muhammad) ကို ကမ္ဘာ့သြဇာအရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာ ထိပ်ကထည့်လိုက်တာကို တချို့လဲ အံ့သြမယ်၊ တချို့လည်း ဟုတ်ရဲ့လားကွယ်လို့ မေးခွန်းထုတ်မယ်...
ကျမ်းမြတ်ကိုရ်အာန်မှ သိပ္ပံဆိုင်ရာ အနာဂတ္တိဟောကြားချက်(ဗျာဒိတ်တော်)များ [ Scientific Prophecies in the Holy Quran ]
ထာဝရဘုရားရှင် မရှိကြောင်း သိပ္ပံပညာက သက်သေပြနိုင်သလား? ထာဝရ ဘုရားရှင် တည်ရှိမှုအတွက် သိပ္ပံပညာကို အထောက်အပံ့အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သလား ? အဲဒီလို...